Pcb Vanamazvikokota kupa chipa PCBs kuti zvakawanda sezvo shoma sezvo 1 chidimbu yakakwirira sezvinoita 5,000 zvidimbu. Uyezve, redu pcb vagadziri vanotarira pamusoro ose magadzirirwo zvinogona kukanganisa. basa iri harigoni pana vakawanda pcb azoshandiswa dzimba. Uyewo, isu vanotevera yakaoma chaizvo pcb manufacturingworkflow inonzi yepamusoro pakukurukura. Golden Triangle pcb vatengi vanobva guru siyana maindasitiri uye mabhizimisi zvikamu, akadai semiconductor, zvebhizimisi kadambari, network uye foni, Wireless pamisika, zvokurapa uye zvipenyu, maindasitiri uye midzi hurongwa, nomumbure kuchengetwa, motokari zvemagetsi, matoyi digitaalinen, rabhoritari zviridzwa, etc. Ndokusaka unogona kuvimba kwedu PCBAmanufacturing uye gungano pcb mabasa. Sezvo pachinhu ichi, tinoisa CHIKAMU edu mutengi nyaya yako kuzviwana. Tinogona kuita kupfuura iwe fungidzira. Kazhinji, edu vatengi yose vane pfungwa dzinotevera mabasa edu; nokukurumidza mhinduro, anonzwisisa mutengo pamwero, pamusoro mutengi maonero, unhu kuzvipira.
Golden Triangle pcb paakapiwa USD anopfuura mamiriyoni 10 kuti fekitari zvivako, kusanganisira pcb uye PCBA gungano equipments (acid Copper Through-buri ra, CNC Drilling, pcb Etching Machine, pcb hwokugaya hwakabvira Machine, pemvura Mount Machine, Reflow muchoto, zvoga Optical Inspection (Aoi) , Wave Valve Work) uye masayendisiti gadziriro management, kuburikidza icho pcb uye gungano pcb zvinodiwa yenyu inogona kuzadziswa yepamusoro uye zvakafanira kuti dzakawanda mitemo.
Dukusa chibooreso Ukuru 0.1mm (~ 4mil)
1 kusvika 36 akaturikidzana
Vanachandagwinyira (mureza FR4), Flex, Aluminum wakakombama.
Pcb azoshandiswa ukobvu kutanga pa 8mil kuti Hazvichinji-chinji uye 0.2mm nokuda Flex.
0,4 magiramu kusvika 4 magiramu mhangura
Minimum Trace / Space kuti 3mil.
Apedza zvinosanganisira; kunyudza Gold, Silver, Tin, Lead vakasununguka HASL uye OSP.
Board pedza mavara; Green, Blue, Black, Yellow, Red, White.
Tinosarudza A copperplate + giredhi kuitira yakagadzikana waivako (general FR-4) kuti pcb azoshandiswa. Panguva PCBA kugadzira muitiro, otomatiki mhangura yakanamirwa pamifananidzo mitsetse uye mukuru-nokukurumidza kuchera michina (pefiyumu: TMAX) kuti zvakarurama uye zvakasimba pakusununguka unovimbisa. All akadhindwa redunhu bhodhi kuchaita kuonekwa nevanhu yepamusoro otomatiki zvinobhururuka vachiongorora michina (kana bvunzo puranga) pa nekutambira mumatanho kuti chokwadi chimwe nechimwe pcb iri OK kubva yomukati nematunhu kusvikira kunze chimiro. With kuchava kutanga kwekupwanyiwa pcb design, nguva iri nguva dzose kunokosha chaizvo. Our anokurumidza dzoro nokuda pcb gungano prototyping, ECO (Engineering shanduko mirairo) uye BGA reballing / rework minamato kunounza vatungamirire nguva yako inonyanya panhau, hazvinei kuti vhoriyamu (sezvo shoma sezvo akaumbwa). maawa 20 pcb yokuenzanisira yedu achitaura basa akatogadzwa upenyu saver kuti huru dzakawanda chigadzirwa magadzirirwo zvikwata kutarisana kuzviomesera deadlines. injiniya wedu vachatevera kuomesa uye akanatswa pcba Workflow kuita chirongwa pcb kugadzira uye neungano PCB. PCBA yedu mapuranga zvinonzi nevakawanda akabatira vatengi dzakasiyana-siyana maindasitiri, akadai motokari, zvokurapa & utano, maitiro kadhi, uye nevatengi Electronics. Kazhinji, isu kuzadzikisa zvinodiwa ISO yepamusoro Kutarisira uye IPC-A-610E yose maitikiro ose kuuya zvinhu, nechidzitiro yokudhinda, smt Chrono, ipqc, Dip uye PCBA bvunzo. Kazhinji, kwenyu pcb kumumvuri anogona zvakanaka inoshumirwa nesu. Sezvo tinogamuchira kwenyu chigadzirwa vaitorwa mhinduro, vose vaivapo muitiro zvichabviswa ichitongwa edu muchinyatsongwarira PDCA utariri Workflow. mainjiniya edu akazvipira kuchaita kukurukura nenguva newe uye kugadzirisa chero dambudziko. Uyezve, munyika yose yedu PCBA kugadzira nezvaanogona kunogona kuderedza mutengo enyu mhiri zvinotarisirwa uye pasina dzichikunetsa. Tichava zvaunogona pcb mugadziri uye gungano pcb naye.
(Kuti uwane mifananidzo tapota tinya pano)
Tinosarudza pamusoro jira bhizimisi kuitira yakagadzikana waivako (general FR-4). Panguva kugadzira muitiro, otomatiki mhangura yakanamirwa pamifananidzo mitsetse uye mukuru-nokukurumidza kuchera michina (pefiyumu: TMAX) kuti zvakarurama uye zvakasimba pakusununguka unovimbisa. All akadhindwa redunhu bhodhi kuchaita kuonekwa nevanhu yepamusoro otomatiki zvinobhururuka vachiongorora michina (kana bvunzo puranga) pa nekutambira mumatanho kuti chokwadi chimwe nechimwe pcb iri OK kubva yomukati nematunhu kusvikira kunze chimiro.
Isu paakapiwa anopfuura mamiriyoni 10 USD pamusoro pcb equipments kusanganisira electroplate mitsetse, kuchera michina, kubhururuka vachiongorora, chinyorwa screener etc. Zvose izvi zviri kupa iwe kugona kuti yaari 15,000 mativi metres pcb kugadzira, riri kushanda kuti diki-svikiro-guru mirairo bhizimisi . Kuti vasangane-siyana pamusika zvinodiwa, tinoita kunze yakasiyana kugadzira negadziriso kutevera pcb mhando. Nenzira iyi, tinogona kubata mutengi kuwedzera zvinodiwa kuburikidza yedu tefa mabasa.
Usazviomesera akadhindwa redunhu kugadzira HDI pcb pakugadzira Aluminum pcb pakugadzira
Vanachandagwinyira flex pcb kugadzira Carbon ingi pcb kugadzira Bofu akavigwa Via pcb kugadzira
Heavy mhangura pcb kugadzira Impedance pcb pakugadzira Achipisira bhodhi pcb kugadzira
Thousand-spec pcb kugadzira Automotive pcb pakugadzira Network kutaurirana pcb kugadzira
Backplane pcb pakugadzira Lead vakasununguka pcb kugadzira Low mutengo pcb kugadzira
4 rukoko pcb kugadzira 6 rukoko pcb kugadzira 8 rukoko pcb kugadzira
Wangopedza pcb kugadzira muitiro, zvino ndiyo nguva yokugadzirira kuuya zvinhu maererano BOM mazita uye kutanga kukwira pcb gungano danho kana tarisa shure pcb kugadzirwa. Uyewo kwemamwe mashoko, unogona kudzokorora mamwe mabasa edu.